Farmaajo oo isku dayay inuu dilo Xasan Sh. iyo Sheekh Shariif | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo isku dayay inuu dilo Xasan Sh. iyo Sheekh Shariif
MUQDISHO, Soomaaliya - Daahir Maxamuud Geelle ayaa ku eedeeyay Farmaajo inuu maleegay qorshe lagu dili rabay Xasan Sheekh, Sheekh Shariif iyo Shariif Xasan, kuwaasoo 19-kii bishan Ciidan dowladda ku weerareen hotel Maido.
"Wixii dhacay 19-ki Febuary waxay ahaayeen isku day dil oo dhamaystiran," ayuu yiri Daahir Geelle xili uu ka hadlayay Shir jaraa'id oo shalay Musharixiinta kuu qabteen Muqdisho.
"Mudaharaad qofkaan u adkaysan karin, in isaga oo banaanbaxo mooyee, aan aqbali karin in qof kale mudaharaado, uma adkaysan karo in qof kale la doorto," ayuu yiri Daahir Geelle.
"Dal aan dibadbax nabad ah ka dhici karin, doorasho xor ah kama dhici karto," ayuu hadalkiisa raaciyay Daahir Geelle.